KOICA မှ ဟင်းသီးဟင်းရွက် မျိုးစေ့များနှင့် ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ လှူဒါန်း ပေးအပ် – Agri Digit News
Posted on Author adminComments Off on KOICA မှ ဟင်းသီးဟင်းရွက် မျိုးစေ့များနှင့် ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ လှူဒါန်း ပေးအပ်
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr.Lee Sang-Hwa က ဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြားပြီး စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာရဲတင့်ထွန်း က “မြန်မာ့စိုက်ပျိုး ပညာပေးရေး လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း” (SAEM Project) နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ဆက်လက်၍ ကိုရီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ KOICA Myanmar ရုံးမှ Chief Representative Ms. Lee Youn Soo က “မြန်မာ့စိုက်ပျိုး ပညာပေးရေး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း” SAEM ၏ ကိုဗစ်-၁၉ စီးပွားရေးကုစားမှု အစီအစဉ်အရ ကိုရီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ KOICA မှ ထောက်ပံ့သည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် မျိုးစေ့များနှင့် ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ရခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြ သည်။ အခမ်းအနားတွင် KOICA မှ ထောက်ပံ့သည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် မျိုးစေ့များနှင့် ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများကို KOICA Myanmar ရုံးမှ Chief Representative Ms. Lee Youn Soo က ပေးအပ်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး က လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
၎င်းနောက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr.Lee Sang-Hwa ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင် ဦးအေးမောင်စိန် နှင့် KOICA Myanmar ရုံးမှ Chief Representative Ms. Lee Youn Soo တို့က SMU ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် AERDTC သင်တန်းကျောင်းတာဝန်ခံများထံ ဟင်းသီးဟင်းရွက် မျိုးစေ့များနှင့် ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများပေးအပ်ခဲ့ကြပြီး “မြန်မာ့စိုက်ပျိုး ပညာပေးရေး လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း” SAEM ဒါရိုက်တာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအေးကိုကို က ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအရ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကျေးရွာသစ် လှုပ်ရှားမှု SMU စီမံကိန်းသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလကုန်တွင် စီမံကိန်းကာလ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ကျေးရွာများ၏ ဝင်ငွေတိုးတက်ရေး ကဏ္ဍများ၊ ကျေးရွာရန်ပုံငွေ များကို အရင်းမပျောက်မတည်ငွေအဖြစ် ဆက်လက်ထားရှိပြီး စီမံကိန်းလွန် ကာလ လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်ချက် များနှင့်အညီ တိုးပွားလာသောရန်ပုံငွေများဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားဖြစ်ကြောင်း၊ အလားတူ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ တောင်သူများ သို့ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ဖြန့်ဝေပေးမည့် တိုးချဲ့ပညာပေးရေးလုပ်ငန်း အတွက် “မြန်မာ့ စိုက်ပျိုး ပညာပေးရေး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း” (SAEM Project) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကိုရီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ KOICA ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန က အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် “မြန်မာ့စိုက်ပျိုး ပညာပေးရေး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း” ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှ စတင်၍ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်(၁၀)ခုတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျော ညီထွေရှိသော စိုက်ပျိုးပညာ ပေးရေး စနစ် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းဖြင့် တောင်သူများ၏ ဝင်ငွေနှင့် သီးနှံထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား တိုးတက်လာစေရန်နှင့် ခေတ်မီနည်းပညာများ အသုံးပြု၍ စိုက်ပျိုးပညာပေးရေးဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင် ရည်တိုးတက်စေပြီး စိုက်ပျိုး ပညာပေးရေးစနစ်အား အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်၍ သီးနှံစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သူ တောင်သူများအတွက် များစွာ အကျိုးရှိစေမည့် စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့အခမ်းအနားမှ ထောက်ပံ့သည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် မျိုးစေ့များနှင့် ကျန်းမာရေး အထောက် အကူပြု ပစ္စည်းများသည် စီမံကိန်းမြို့နယ် (၂၇) မြို့နယ်ရှိကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု (၁၅၀၀)စီ ဖြင့် မျိုးစေ့ (Seed Kit) စုစုပေါင်း (၄၀၅၀၀) ကို ထောက်ပံ့ဖြန့်ဖြူး ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ COVID-19 ကပ်ရောဂါကျရောက်နေစဉ်ကာလအတွင်း စီမံကိန်းဒေသမှ ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ အတွက် စားနပ်ရိက္ခာအထောက်အပံ့ရရှိစေရန် နှင့် အဟာရ ပြည့်ဝ၍ ဘေးကင်း လုံခြုံသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စားသုံးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ၊ မိမိအိမ်ခြံဝန်းအတွင်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီး မိသားစုစားသုံးမှုမှ ပိုလျှံသောသီးနှံများအား အခြားသူများသို့ မျှဝေ နိုင်ခြင်း၊ အပိုဝင်ငွေရရှိ နိုင်ခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေရန် ရည်ရွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။